Ny Fitsarana Eoropeana dia namoaka didim-pitsarana tamin'ny fampitomboana lanja ny fizahantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Ny Fitsarana Eoropeana dia namoaka didim-pitsarana tamin'ny fampitomboana lanja ny fizahantany
Janoary 9, 2014
Tamin'ny 26 septambra lasa teo, namoaka didim-pitsarana ny Fitsarana Eoropeana, izay nanitsakitsaka ny fomba nanefan-ketra haba tany Angletera.
Tamin'ny 26 septambra lasa teo, namoaka didim-pitsarana ny Fitsarana Eoropeana, izay nanitsakitsaka ny fomba nanefan-ketra haba tany Angletera. Rehefa avy nanome fotoana ho an'ny indostria hanombatombana ny vokany, ny Fikambanan'ny mpikarakara ny fizahan-tany eoropeanina (ETOA) dia nanadihady ireo mpandraharaha mpizahatany mpizahatany sy mpivarotra ambongadiny monina any UK momba ny fiantraikany.
Rehefa avy nifampidinika tamin'ny mpikambana ao aminy momba ny vokany izay nety ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany any UK ny fanapahana vao haingana nataon'ny Fitsarana Eoropeana (ECJ), 96% amin'ireo mpivarotra ambongadiny UK izay namaly no nilaza fa hanimba ny fifaninanana sy ny fahafahan'izy ireo mivarotra ny didim-pitsarana vaovao. ny UK ho toeran-kaleha, vokatr'izany dia voatery mifindra toerana ivelan'ny EU izy ireo.
Ny haba amin'ny Operations Margin Scheme (TOMS) dia tokony hapetraka amin'ny asa aman-draharaha amin'ny fifanakalozana orinasa. Ny didim-pitsarana dia manery ny mpivarotra ambongadiny rehetra hanambara ny sisin-trosany amin'ny mpanjifany ary hampamoaka haba amin'ny alàlan'ny fifanakalozana.
Ireo fepetra roa ireo dia mametraka enta-mavesatra amin'ny fifaninanana sy birao amin'ny raharaham-barotra tratry ny hetra.
Misy hetra amin'ny vola marin'ny orinasa; izay mpifaninana monina ivelan'ny EU dia tsy mandoa. Izy ireo koa dia manery ny mpandraharaha hampiseho amin'ny mpanjifan'ny orinasany ny vola azony. Nilaza ny mpandraharaha iray hoe: "Tsy mahatonga ahy tsy mahay mitarika fotsiny izany, fa mampiharihary ny tsy fahaizako manao izany amin'ny mpanjifako!" Ny fomba fikajiana koa dia miteraka fahasarotana amin'ny mpitondra fivavahana tsy azo resena. Ny iray kosa nilaza hoe: “Tsy ho vitantsika ny manao kajy ny VAT-tsinay amin'ny fifanakalozana; amin'ity taona ity dia hanana varotra 350,000 mahery izahay. ”
Fa ny tena matotra kokoa aza, ny fanapahana dia ampiharina amin'ny VAT amin'ny fanondranana fizahan-tany rehetra, ao anatin'izany ny fonosana amidy ny fialantsasatra any UK amin'ny alàlan'ny antoko fahatelo sy ny fivarotana fonosana eropeana amin'ny orinasa iray miorina amin'ny ankamaroan'ny tsena fiaviana manan-danja, ao anatin'izany i Shina. , India, ary Etazonia. Mampihena ny fifaninanana ao UK, mampihena ny fifaninanana ny fivarotana UK ary mahatonga ny UK tsy hifaninana firy ho toy ny fototra hanaovana orinasa fizahan-tany.
Ny fanehoan-kevitra momba izany ny indostrian'ny ambongadiny UK dia manamafy. Raha nanontaniana izy ireo ny amin'ny fiatraikany amin'ny fifaninanany dia nilaza izy ireo fa tena hanimba izany. Ny fahaizan'izy ireo mivarotra UK dia haratra mafy. "Miatrika tsena manahirana izaitsizy izahay," hoy ny mpandraharaha iray hafa, "toy ny tsenan'ny mpianatra sy Indiana. Ny tsenan'i India dia mitaky saika 45% amin'ny orinasantsika: raha tsy maintsy mampiakatra ny vidiny isika dia hisafidy toerana hafa aleha. "
Ankoatr'izay, satria io hetra io dia tsy misy fiantraikany amin'ny orinasa miorina ivelan'ny UE, mihoatra ny 50% amin'ireo namaly no nilaza fa terena hifindra toerana izy ireo. Ny iray kosa naneho hevitra hoe: "Ny fiakaran'ny vidiny izay terena ho antsika noho ny fiorenany any Angletera dia hanisy fahasahiranana be an'ireo mpandraharaha tsy ao amin'ny EU." Ny iray kosa nanambara hoe "mino izahay fa tsy azo inoana fa afaka manohy mivarotra amin'ny alàlan'ny maodelim-barotra ankehitriny. Mijanona ho very vola an-tapitrisany amin'ny fidirana VA voasakana isika… na dia mbola tsy dinihina aza ny vokatry ny fandoavana ny VAT amin'ny sisin'ny famatsiana UE rehetra. Maro amin'ireo mpifaninana aminay no miorina ivelan'ny EU; noho izany, ny fampiakarana ny vidiny dia tsy ho safidy mety. …. Ny fifampiresahana any ivelan'ny EU dia mety ho io ihany no safidintsika. ”
Ireo namaly ny fakan-kevitr'i ETOA dia manana vola mitentina £ 2.4 miliara ary mampiasa olona maherin'ny 2,500 any UK.
"Ny didim-pitsarana dia fanafihana ny fizotran'ny fanomezana lanja ny serivisy fizahan-tany," hoy i Tom Jenkins, Lehiben'ny Executive ETOA. “Manimba tampoka ny fandroson'ny orinasa miasa amin'ny tsenan'ny fitomboana izy io. Izy io dia miavaka amin'ny 'loza ara-indostrialy'. Saingy eo am-pelatanan'ny governemanta ny fomba fampiharana izany didim-pitsarana izany. Tena mila fanavaozana io tetik'asa momba ny hetra io (TOMS): ny iray amin'ireo lafiny manaitra amin'ity didim-pitsarana ity dia ny fanomezana azy ireo ny fialan-tsasatra ho an'ny fialantsasatra any ivelany, rehefa mahazo hetra vaovao sy lehibe amin'ny fanondranana fizahantany eto amintsika. Ka ny manaitra dia tsy ny habibiana fotsiny amin'izay naroso, fa ny hadalany. Ny fanavaozana dia tsy maintsy atao ao anatin'ny fandaharam-potoana alohan'ny fampiharana. ”